Archives des FET 100 taona | Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Étiqueté : FET 100 taona
Arahabaina isika AFAFI-FET tsy ankanavaka manerana ny Nosy nahatontosa soamantsara ny famaranana ny fankalazana ny taon-jobily faha 100 taona niorenan’ny FET teto Madagasikara iny. Iaraha-mahita sy mahatsapa fa samy niezaka ny isan-diosezy nanamarika izany...
TSATILAKRI ! Indro ampitaina amintsika ny fanapahan-kevitry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara, nampitain’i Mgr Benjamin RAMAROSON, Arsevekan’Antsiranana. « Tsy hotanterahina amin’ity taona ity ny Kongresy Eokaristika miaraka amin’ny faha-100 taonan’ny FET saika hatao tany Antsiranana. Amin’ny...
FET 100 taona – fifampizaràna
TSATILAKRI Zava-dehibe loatra ny faha-100 taona ka tsy avelantsika mandalo fotsiny. Fotoana mety ifampizaràna ny soa notovozintsika teo anivon’ny fikambanana izao. Misaotra mialoha amin’ny fandraisana anjara. Alefa mailaka amin’ny Foibe nasiônaly : fet_afafi@yahoo.fr ny...
Ivon’ny fankalazana ny faha 100 taonan’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora
TSATILAKRI Ny 22 nôvambra 2019, fetin’i Mb Cécile, no feno 100 taona tanteraka ny FET eto Madagasikara. Aoka mba tsy ho hadinoina io andro lehibe io fa homarihina amin’ny fomba manokana. Mba ho fiombonana manerana...
Kaongresy eokaristika 2020 : ireo tsara ho fantatra
TSATILAKRI Isan’ny hetsika lehibe hanamarihana ny faha zato taonan’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ny kaongresy eokaristika hatao any Antsiranana. Ireto avy ny tsara ho fantatra amin’izany : Daty : 26 aogositra – 31 aogositra 2020 Fisoratana...
Hafatry ny Aomônie Nasionaly ho an’ny faha 100 Taona
« Ny Teny tonga Nofo, Nofo tonga Mofo, Mofo zary Aina » Io teny Fanevan’ny Taon-jobily faha 100 taona niorenan’ny FET teto amin’ny Nosintsika io no entina miarahaba antsika rehetra amin’izao taom-pahasoavana diavintsika AFAFI-FET sy...
Vavaka noho ny taon-jobily faha 100 taona niorenan’ny fet teto madagasikara
Ry Andriamanitra Rainay ô, mitsaoka Anao sy misaotra anao izahay noho i Jesoa Kristy Zanakao, fanomezan’ny Fitiavanao ho fiainan’izao tontolo izao. Mba topazo maso izahay zanakao mankalaza ao anatin’ny hafaliana sy fanantenana ary fitiavana,...
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – Martsa 2021
Hafatry ny Ray Masina ho an’ny Karemy 2021 : “Indro miakatra ho any Jerosalema isika…” (Mt 20,18)
Fanambaran’ny FFKM : “aoka ny rariny hikoriana…”
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – Febroary 2021